कोरोनाभाइरस संक्रमण किन रिकभरी पछि फिर्ता हुन्छ? - हातेमालो डेली
कोरोनाभाइरस संक्रमण किन रिकभरी पछि फिर्ता हुन्छ?
वीरगन्ज र रौतहटका प्रत्येक व्यक्तिले उपन्यास कोरोनाभाइरसलाई निको पारे पनि सकारात्मक परीक्षण गरे। यस्ता पुनरावर्ती घटनाहरूले गर्दा मानिसहरूमा संक्रमणको डर बढ्दो छ। धेरैले यो प्रश्न उठाए: के ती बिरामीहरुबाट फेरि भाइरस सार्न सकिन्छ जसलाई निको पारियो र डिस्चार्ज गरियो।
सार्वजनिक स्वास्थ्य विज्ञहरूसँग यस प्रश्नको निश्चित उत्तर छैन। धेरै जसो भन्छन कि यो व्यक्तिले यो रोग सार्न सक्छ कि भनेर भन्न गाह्रो छ। तसर्थ, पुन: सकारात्मक परीक्षण गरेका पुन: प्राप्त भएका बिरामीहरूलाई फेरि अलगावमा राखिन्छ, उनीहरूले सूचित गर्छन्।
एक विशेषज्ञका अनुसार भाइरस, चाहे सक्रिय हो वा निष्क्रिय हुने प्रक्रियामा छ, पीसीआर परीक्षणमा सकारात्मक परिणामहरू देखाउँदछ। जबकि निष्क्रिय भाइरसले अरूलाई संक्रमित गर्दैन, केवल जीवितहरू मात्र गर्न सक्छन्। उनले यो पनि सुझाव दिए कि भाइरस संस्कृति पीसीआर परीक्षणमा सकारात्मक परीक्षण गरेका भाइरस निष्क्रिय वा सक्रिय छन भनेर जान्न आवश्यक छ।
उनी भन्छन् कि यस्तो अवस्थामा ‘पुन: स cases्क्रमित’ को सट्टा ‘पुन: सकारात्मक’ को रूपमा सिफारिस गर्नु बढी उचित हुन्छ किनकि अरु कोही पनि भाइरस सार्दैन, बरु आफ्नै शरीरमा रहेको भाइरस फेरि परीक्षणमा देखा पर्दछ।
Previous articleनेपाल सरकारले लिपुलेक र कालापानी समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णय
Next articleनेपालमा पहिलोपटक डाक्टरलाइ पनि कोरोना संक्रमण !